Aadaa – siifsiin
Murataan marqa baalarratti nyaata. Yaa marqa si afuufuun si liqimsuufi. Gubataa marqaa hubataatu arga. Akkan hin yaanne misingaa marqite, akkan hin dhiifne dhadhaa itti naqxe
Bakkeewwan argamsa Odaa
Odaa Bisil: Godina shawaa Lixaa Aaana IluuOdaa Bulluq: Horroo Guduruu Wallagga Aaanaa HorroOdaa Hullee: Godina Jimmaa Aanaa Oomoo NaaddaaOdaa Garaadoo: WalloOdaa Roobaa: Baalee Aanaa GindhirOdaa Nabee:Shawaa Bahaa Aanaa AqaaqiiOdaa Bultum: Hararge Lixaa, Aanaa Odaa Bultuum
Bara durii haadha manaa fi abbaan warraa waliin jiraatu ture. Lamaanuu erga waliin jiraachuu jalqabanii turanii jiru. Baay’isanii wal jaalatu ture. Yeroo tokko garuu wal lolan. Duraan wanta wal lolanii hin beekneef walitti araaramuu didan. Abbaan manaas “Erga wal lolla ta’ee maaliif waliin jiraanna,narraa gali jedheen. Isheenis gara mana warra isheetti sokkite. Warri ishees akka … Continue reading Jaarsummaa
Makmaaksa Afaan oromoo
Hiikkan Makmaaksa kunnenii maali? Leenca humnaan roorrisu, qamaleen malaan ajjeefte.Lukkuun biyya hin qabdu, bakka bultu hin dhabdu.Maraattuufi sooressi akka argetti haasawa. Mucaan " nyaanyaa" jedhe osoo hin nyaatiin hin hafu.Of-jajjuun loon lamaa, tikseen kuma lama. "Osoo wajjiin gallee hoolaa, walii qallee" jette jeedalli sareen.Ari'ii biyyaa baasii qabii itti hasaasi. Bareedina gurraachaafi dubbii gamnaa nama bira … Continue reading Makmaaksa Afaan oromoo
Duudhaan hawaasaa wanta aadaatin baayyee walitti dhiyaata. Haa ta’u malee, akka wanta aadaa bu’aa ogummaa nama dhuunfaa yookan garee muraasaa osoo hin ta’in waan gamtaan Hawaasaa beekkamtii itti kennuun bifa wal-fakkaatuun irratti walii galaniidha. Kunis barsiifataalee yeroo dheeraaf hawaasicha keessatti mul’achaa ture kan haammatuudha. (Dorsan, 1972) Duudhaan hawaasaa ummata keessatti umurii dheeraa kan lakkoofsiseefi hawaasni hundi itti waliigalee kan fudhate akka ta’eefi kutaa kana keessatti kan ramadaman … Continue reading Duudhaa Hawaasaa